China Customized Private Label Boxes Wholesale Fluffy 25mm Mink Eyelashes orinasa sy mpanamboatra | Weiti
Volomaso misy marika manokana namboarina manokana Wholesale Wholesale Fluffy 25mm Mink eyelashes
1, fomba HELENA fomba mirefy 25mm masiaka habibiana
2, amboary ny fombam-bolo sy ny fonosana volomaso misy
3, Super voajanahary & maivana
4, kapoka maharitra tsy mampino
25MM LASHES DISO
Vidiny mivantana an'ny orinasa
Volo mink maimaim-poana masiaka 100%
Kalitao avo sy vidin'ny fifaninanana
Maherin'ny 200000 tsiroaroa
Andalana famokarana feno hitazomana ny fandefasana entana haingana
Ataovy miavaka ny fombam-bolo sy ny fonosana volomaso misy
√ Tsy misy habibiana sy voadidy tanteraka, azo avy amin'ny fanosehana moramora ny biby velona, ​​nefa tsy nanimba azy ireo.
√ Volomaso vita amin'ny tanana, volavolaina namboarina ary volomaso mink tena manokana.
√ Super voajanahary & maivana.
√ kapoka maharitra tsy mampino.
√ Manampia glamorant eo noho eo miaraka amin'ny volomaso mink 100%.
√ Fampiharana mora sy malefaka.
Miaraka amin'ny 100% Siberian Mink amin'ny vanim-potoana faran'izay tsara indrindra avy amin'ireo zoo maimaimpoana ary voaverina mandritra ny vanim-potoana fandosirana, ny kapoka ataontsika dia manome ny safidin'ny Mink Lashes marina indrindra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana volon'ondry mink ambony indrindra, ny fikapohanay dia mipoitra sy kanto, nefa malefaka sy malefaka. Manolotra fehiloha volom-bolo marevaka, lava, crisscross ary maharitra izahay izay mety sy ilaina amin'ny fotoana rehetra, toy ny makiazy isan'andro, fety sns.
Ny karazana fonosana volomaso eyelash vonona rehetra tsy voatery
Ny boaty volomaso sy ny volomaso dia azo ampiasaina amin'ny fanaingoana ny marika manokana anao amin'ny fanontana 3D UV. Raha mila fonosana kapoka bebe kokoa, aza misalasala mifandray aminay.
Mandrosoa ny lakaoly amin'ny fehikibo fehikibo amin'ny alalàn'ny landihazo + menaka fanadiovana (remover makiazy maimaimpoana).
Soso-kevitra: Andraso segondra vitsy vao rava ny lakaoly.
Esory tsara ny volomaso masonao, manomboka amin'ny zoro ivelany. Raha mahatsapa fanoherana ianao, vahao ny lakaoly alohan'ny hanohizana amin'ny alàlan'ny fanondrahana tendrony Q amin'ny famoahana makiazy tsy miorina amin'ny menaka ary atsofohy amin'ny fantsona izay sahiranao mametaka azy io.
Diovina ny lakaoly mihoatra ny volomaso amin'ny alàlan'ny landihazo + menaka manadio (remover makiazy maimaimpoana) ary ataovy ao anaty fitehirizana madio. Aza adino ny mandena ny kapoka! Afaka mandray rano kely izy ireo, saingy aza totonoina. Raha mando loatra ny kapokaponao dia mety hanary endrika izy ireo.
Teo aloha: Fametahana marika manokana momba ny volomaso eyelash boaty hosoka ambongadiny 25mm volomaso Mink 100%
Manaraka: Volomaso manokana fonosana malefaka matevina vita tanana 25mm 3d Mink Volomaso
Mpivarotra volomaso 25mm Mink
Volomaso mink 3d
3d Mink Eyelashes mpivarotra
Mink eyelashes diso
Volo ambongadiny volom-borona 100% Mink Thic ...
Volomaso mpamorona volom-borona China
Fanontana amin'ny Logo anao Mink Lashes 5 ...
Fanitarana volomaso, Mpivarotra volomaso, Volomaso maso, lipgloss, kapoka mink, eyeliner,